Carrefour yatotibvumidza kubhadhara neApple Pay mumasisitimu asingabate | Ndinobva mac
Mushure mekumirira kwakagara anopfuura makore maviri, vashandisi veSpanish isu takatanga kushandisa Apple Pay pakutanga kwemwedzi uno. Chinhu chakashata ndechekuti, sezvo isiri iyo nyika inonyanya kukosha kukambani inotungamirwa naTim Cook, zvinotarisirwa kuti kuwedzera kwayo hakuchikurumidze. Pakutanga isu tinongokwanisa chete kushandisa Apple yekubhadhara nhare sevhisi nemakambani matatu emari (Banco Santander, American Express neEdredred) uye yekutanga isiri-mari kambani kusanganisira rutsigiro, Carrefour, nekadhi rako.
Kadhi racho rinonzi Carrefour PASS uye chinhu chakanakisa nezve kadhi iri ndechekuti isu tinogona kurishandisa mune chero kugadzwa izvo uve nehurongwa hunoenderana nemari isingataurike. Nenzira iyi, isu tinogona ikozvino kushandisa Carrefour PASS kadhi neApple Pay muzvitoro zvinopfuura zana munyika yese, kutora mukana nezvose Carrefour zvakaderedzwa uye kukwidziridzwa, kana munzvimbo ipi neipi inogamuchira isingabatanidzwe kubhadhara chero bhangi ratakachengeta yedu mari.
1 Carrefour Pass inoenderana neasina kusangana masisitimu
2 Tinogona kubhadhara neApple Pay + Carrefour Pass kubva kuMacBook Pro nyowani
Carrefour Pass inoenderana nehurongwa contactless
Kana iwe uchinge wakavhiringidzika uye usingazive kuti nei zvichikosha kana kufadza kuti tinogona kushandisa Apple kubhadhara basa, pane zvikonzero zvinoverengeka:
Chengetedzo: Kunyangwe isu tichifunga kuti zvichave zvakapesana, kubhadhara neApple Pay kwakachengeteka pane kuzviita uine kadhi repanyama. Kune rimwe divi, kuti tibhadhare neCupertino nhare yekubhadhara nhare, tinofanirwa kuongorora kuzivikanwa kwedu tichishandisa Kubata ID. Kune rimwe divi, chiitiko chega chega chinoshandisa kiyi yakavharidzirwa kana chiratidzo chinopera kana tangochishandisa. Ichi chiratidzo chinopa ruzivo rwese rwunodiwa kuitira kuti mubhadharo ugone kuitwa, asi mune irwo ruzivo hapana kana imwe yedata redu pachedu.
Kupfuura Nyore: Kubhadhara neApple Pay kuri nyore sekutora yako iPhone, iPad kana Apple Watch, kudzvanya bhatani rekutanga kaviri (kudivi pane wachi) nedhiyo rakakiiwa uye, pasina kusimudza munwe kubva kuTouch ID, kuunza iyo iPhone, iPad padyo kune mumwe nemumwe.kana Apple Tarisa kune chiraji chishandiso.
Speed: Ini ndaisa poindi iyi yechitatu nekuti vamwe vashandisi havazobvuma, asi ini ndinofunga zviri kukurumidza kutora nharembozha muhomwe yedu, kuisa munwe paTouch ID woiunza padhuze nechajaja pane kutora chikwama , tora kadhi upinze mukati, riendese kuburikidza nemuchina, mune dzimwe nguva unofanirwa kusaina, kudzorera kadhi muchikwama uye chikwama muhomwe.
Kana iwe uri kufunga kuti kubhadhara neApple Watch hakuna kuchengeteka nekuti haina Kubata ID, warasika: kana tikabvisa wachi kubva pachiuno chedu, chinhu choga chatingaite nacho kuziva nguva; zvese zvinomira kushanda, pakati peiyo Apple Pay. Kamwe isu patakaisa paApple Watch uye nekuizarura iyo ichibatanidzwa kune yedu iPhone, Apple Pay inoshanda zvakare.
Tinogona kubhadhara neApple Pay + Carrefour Pass kubva kuMacBook Pro nyowani
Chii chingangodaro chinonyanya kufadza nezve zvese izvi kune vaverengi veSoy de Mac ndechekuti isu tinogona shandisa iyo Apple Pay + Carrefour PASS combo kubva kuMacBook Pro nyowani. Iyo yazvino nyanzvi Apple laptop yasvika neTouch ID, iyo ichatibvumidza kuti tizvizivise pachedu nenzira dzakasiyana uye tishandise Apple Pay pawebhu, inova sisitimu yakafanana nePayPal asi yazvino uno: patinoona chinhu chatinogona kutenga tichishandisa Apple Bhadhara Tichafanira chete kusarudza iyi nzira yekubhadhara uye tizvizivise pachedu nekuisa zvigunwe pamunwe weTouch ID. Kana isu tisina MacBook Pro yezvazvino uye isu tine Mac kubva muna 2012 zvichienda mberi, tinogona zvakare kushandisa Apple Pay pawebhu, asi isu tichafanirwa kuzviongorora pachedu tichishandisa Kubata ID ye iPhone yedu kana iPad.
Chinhu chakanaka pamusoro peichi ndechekuti tinogona kuwedzera account kana kadhi kubva kubhangi chero ripi zvaro munyika, zvinoreva kuti tinogona kubhadhara neApple Pay mune chero inoenderana nzvimbo kubva zvino zvichienda kuCarrefour PASS kadhi pasina kuvimba neimwe bhangi. Kana iwe usiri kuda kumirira uye kupererwa kusvikira Apple Pay isanganisira rutsigiro rwebhangi rako, Carrefour inogona kunge iri mhinduro kuminamato yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Carrefour yatotibvumidza kubhadhara neApple Pay pane chero fekitori inogamuchira isina kutaurirana
Fernando García akadaro
Ichokwadi here kuti kubhadhara neCarrefour Pass kune mashoma kune € 20 kana uchibhadhara neApple Pay?
Pindura kuna Fernando García
Ndabhadhara zvakadarika iyo mari, zvazvinazvo ndezvekuti pakubhadharira anodarika € 20 inobvunza pini.
Apple Mepu inowedzera huwandu hwemaguta nerutsigiro rweUK ruzivo rwekufambisa veruzhinji